I-Hare engenabugovu: I-Buddhist Jataka Tale
Kutheni kukho i-Hare kwiNyanga
Imvelaphi: I-Jataka Tales
I- Jataka Tales ziindaba ezivela eIndiya zithetha ngobomi bokuqala bukaBuddha. Amanye amabali athetha ngobomi obudlulileyo boBuddha ngohlobo lomntu, kodwa ezininzi ziyimvelaphi yezilwanyana, ezifana neentsomi ze-Aesop. Ngenxa yokuba uBuddha wayengekabi uBuddha ebomini bakhe bokuqala, kwiibali ahlala ebizwa ngokuba yi "Bodhisattva."
Le ibali le-hare lingenanto elingabonakaliyo libonakala, ngeendlela ezahlukeneyo, kwiiCan Canon (njenge-Sasa Jataka, okanye i-Jataka 308) kunye neJatakamala ye-Arya Sura.
Kwezinye iimeko, iicatters zeNyanga zibonwa njengeyomfanekiso wobuso - umntu oqhelekileyo kwiNyanga-kodwa e-Asia, kuyaqhelekile ukuba ucinge umfanekiso womvundla okanye u-hare. Le ibali yeso sizathu sokuba kukho intonga enyangeni.
Ingqungquthela yesiHungulu esingenabugovu
Esidlulileyo, i-Bodhisattva yazaliswa ngokutsha njenge-hare. Wahlala ehlathini eliqingqiweyo phakathi kokunciphisa, utyani kunye neentlobo eziqhenqileyo, ezijikelezwe ngokunyuka kwemivini kunye nama-orchids asendle. Ihlathi lalizityebi kunye neziqhamo kunye nomlambo wamanzi acocekileyo njengeblue blue as lapis lazuli.
Leli lihlathi laliyintandokazi yokuzulazula - abantu abahoxayo kwihlabathi ukugxila kwiindlela zabo zokomoya. La ma-acestics ahlala ekudleni ayewacela kwabanye. Abantu belo xesha babecinga ukunika izipho kubangcwele abajikelezayo ukuba babe ngumsebenzi ongcwele.
I-bodhisattva hare yayinezihlobo ezintathu-i-monkey, i-jackal, kunye ne-otter-eyayibukela kwi-hare ehlakaniphile njengenkokeli yabo.
Wawafundisa ukubaluleka kokugcina imithetho yokuziphatha, ukugcina iintsuku ezingcwele kunye nokunika izipho. Nanini na imini eyingcwele, i-hare yayibongoza abahlobo bakhe ukuba xa umntu ebabuza ukutya, babefanele banike ngokukhululekile nangomdla kwizinto ababezibuthele zona.
U-Sakra, inkosi yama-devas, wayejonge abahlobo abane baseburhuleni lakhe elikhulu leemabula kunye nokukhanya kwiNtaba yeMeru , kwaye ngolunye usuku olungcwele, wanquma ukuvavanya amandla abo.
Ngaloo mini, abahlobo abane bahlukana ukuze bafumane ukutya. I-otter ifunyenwe iintlanzi ezibomvu ezisixhenxe kumlambo; ijoba yafumana isilwanyana kunye nesitya sombisi obombile umntu oye washiya; iimbongolo zaqokelela imango emithini.
U-Sakra wathabatha ifom yeBrahman, okanye umbingeleli, waya kwi-otter waza wathi " F uphendukile, ndilambile." Ndifuna ukutya ngaphambi kokuba ndibe nemisebenzi yobubingeleli. Kwaye i-otter yanikela i-Brahman iintlanzi ezisixhenxe ezazizibuthele ukuze zifumane isidlo sayo.
Emva koko uBrahman waya kwintonga waza wathi, "F uphuma, ndilambile." Ndifuna ukutya ngaphambi kokuba ndibenze imisebenzi yam yobubingeleli. Kwaye ijeka lanikeza iBrahman isilwanyana kunye nobisi obunqambileyo ayeyilungiselele ukufumana isidlo sakhe.
Emva koko uBrahman waya kwidonki, wathi " Ndiza, ndilambile. " Ndiyadinga ukutya ngaphambi kokuba ndikwazi ukwenza imisebenzi yam yobubingeleli. Kwaye i-monkey yanikela i-Brahman iimango ezinamaqabunga ekulindeleke ukuba adle.
Emva koko uBrahman waya ku-hare kwaye wacela ukutya, kodwa i-hare yayingenayo ukutya kodwa ingca eluhlaza ehlathini. Ngoko i-Bodhisattva yaxelela i-Brahman ukuba yakhe umlilo, kwaye xa umlilo uvutha, wathi " andinanto yokukunika ukutya kodwa mna!" Emva koko, intonga yaziphosa emlilweni.
U-Sakra, owayeziguqulwe njengeBrahman, wamangaliswa waza wathinteka kakhulu. Wenza ukuba umlilo uhambe ngokukhawuleza kangangokuba i-hare yayingatshitshisi, ize ibonakalise indlela yakhe yokwenyaniso kwi-hare engenanto. Wathi, " Intsimbi edibeneyo," wathi, " Ubuhle bakho buya kukhunjulwa ngonaphakade ." Emva koko uSakra wachaza isalathisi esilumkileyo kwisibhakabhaka seNyanga ukuze bonke babone.
U-Sakra wabuyela ekhaya lakhe eNtabeni iMeru, kwaye abahlobo abane bahlala ixesha elide kwaye bevuya kwihlathi labo elihle. Kwaye nanamhla, abo bajonga phezulu kwiNyanga bangabona umfanekiso we-hare.